"Na inona na inona marina, na inona na inona manan-kaja, na inona na inona mahitsy, na inona na inona madio, na inona na inona maha-te ho tia, na inona na inona tsara laza, … dia hevero izany."Filipiana 4:8
Nisy mpanao gazety niteny hoe: “Ankehitriny isika dia manontany tena raha mbola manana soatoavina”. Ny resahiny amin’izany dia ireo soatoavina ara-toe-panahy, izay mibaiko ny fitondrantenantsika ao amin’ny fiarahamonina ankehitriny. Any amin’ireo firenena kristiana dia notsoahina avy tao amin’ny Baiboly ny ankamaroan’ireo soatoavina ireo. Ankehitriny dia mampisalasala ireny rehetra ireny, rehefa ialana sy atao ho toy ny tsy misy Andriamanitra sy ny Teniny. Nefa nandritra ny arivo taona maro, ny Baiboly dia mbola mpitari-dalana azo antoka hatrany.
“Ny Teninao no fahamarinana”, hoy Jesosy tamin’ny Rainy (Jaona 17:17). Io Teny io ihany no manazava sy manaporofo ny tenany, satria “nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra ... mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra…” (2 Timoty 3:16).
Ny fihainoana azy no mampipoitra ny finoana, izay “avy amin’ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin’ny tenin’i Kristy” (Romana 10:17): mino an’i Jesosy isika, Jesosy Izay mitondra ho antsika, amin’ny alalan’ny hazofijaliana, ny famelan-keloka avy amin’Andriamanitra sy ny fitahiana rehetra aterak’izany. Andriamanitra fitiavana no ahafantarantsika an’Andriamanitra. Hitantsika ireo soatoavina ankasitrahin’Andriamanitra, izay niseho avokoa tao amin’ny fiainana sy asan’Ilay Zanany malalany. Koa taomina ny mpino tsy hihazona izany harena izany ho azy samirery, fa hiaina kosa ny toetran’i Jesosy, sy hampamirapiratra izany eo amin’izao tontolo izao.
“Amin’ny finoanareo dia manehoa fahatanjahan-tsaina, ary amin’ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, ary amin’ny fahalalanareo dia fahononam-po, ary amin’ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin’ny faharetanareo dia toe-panahy araka an’Andriamanitra, ary amin’ny toe-panahinareo araka an’Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin’ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra” (2 Petera 1:5-7).